सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्-डेंगुले प्रदेश ५ मा महामारीको रुप लिएको छैन::Independent News Portal from Nepal.
नवलपुरको इट्टा उद्योगमा साढे दुई करोडकोे नोक्सानी, ५० हजार इट्टा नष्ट
गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन
सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्-डेंगुले प्रदेश ५ मा महामारीको रुप लिएको छैन
बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ मा डेंगु रोग महामारीको रुपमा अझै नफैलिएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ ।
प्रदेश न ५ मा डेंगुको संक्रमणबाट १ जनाको मृत्यु भैसकेको सयौं जना बिरामी भएर थला पर्दा पनि सरकारी पक्षले भने यसलाइ सामान्य र बिगतका बर्षभन्दा कम प्रभाब भनेको छ । सरकारले दिने तथ्यांकमा पनि एकरुपता छैन ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ ले आज बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिब थानेश्वर ज्ञवालीले बाहिर हल्ला पिटिएजस्तो भयावह अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
उनले रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको जानकारी दिए । उनले सरकार लागिपरेको र यस्मा सबैपक्ष जिम्मेबार बन्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरिरहेको दाबी गरे ।
प्रदेश ५ का स्वास्थ्य निर्देशक डा विनोद गिरीले अहिले भयावह रुपमा डेंगु फैलिन नपाएको उनले बताए ।
उनले प्रदेश ५ मा १ सय २६ बिरामी र ८७ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको जानकारी दिए । डेंगुबाट बच्नका लागि अब फुल कपडा लगाउनुपर्ने उनले सुझाव समेत दिए । ब्यबहार परिबर्तन गरेर डेंगु नियन्त्रणमा सबै लाग्न डा गिरिको सुझाब छ ।
उनले हरेक दिन स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशको डेंगुको तथ्यांक सार्बजनिक गरिने बताए ।
बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले अस्पतालमा अहिलेसम्म ६९ जना डेंगुका बिरामी उपचारका लागि आएको बताए । यी मध्ये २३ जना बुटवलका र अन्य बुटवल बाहिरका भएको डा खनालले जानकारी दिए ।
मर्सिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष जनक कोइरालाले ३२ जना बिरामी आफ्नो अस्पतालमा डेंगुको उपचार गरेको बताए । अहिलेपनि १२ जना अस्पतालमै उपचाररत रहेको जानकारी दिए । यता बुटवल हस्पिटल प्रालिका डाइरेक्टर मुक्तिराज पौडेलले सरकारी बेवास्ताकै कारण दैनिक बिरामीको संख्या बढ्दै गएको बताए ।
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, भदौ २४, २०७६ , ६:१५ बजे
लेक एक्स्पोमा विद्यार्थीको प्रतिभा : स्मार्ट ट्राफिक लाईट देखि राइजिङ नेपाल स्मार्ट सिटी सम्म